Otu esi eji Gimp mepụta ihe ngosi ihe omimi gi Site na Linux
Otu esi eji Gimp mepụta ogwe aka ihe ngosi gi
Onye ọrụ tavo hapụrụ taa a nkuzi na anyị forum, nkuzi m na-ebipụta ebe a n'ihi na ọ kwesịrị ya 😀
Dịka nkwa bụ ụgwọ, ụnyaahụ na IRC m kwere nkwa KZKG ^ Gaara mee nkuzi a banyere otu esi mepụta ogwe igwe ojii anyị Gimp.
Ana m arịọ mgbaghara maka screenshots na Bekee, ebe m na-eji ya n'asụsụ ahụ n'ihi na ọ bara m uru mgbe m na-eso nkuzi
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ imeghe Gimp ma họrọ ụsọ ihu na uru ndị a:
Dị ka a hụrụ na nseta ihuenyo, uru ga-adị fcfdfe N'ụzọ nke a, ndabere ga-abụ na-akụ na aesthetics nke forum.
Mgbe ahụ, anyị na-aga taabụ Faịlụ> Ọhụrụ na windo nke na-egosi, anyị na-ahọrọ akụkụ ndị a:
Kehoraizin uru kwesịrị 450 na 60 maka vetikal (i nwere ike na agbanyeghị dị ka mmasị gị). Ọzọkwa na Advanced Nhọrọ ha ga-ahọrọ ihu-agba dị ka ndabere.
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji ngwa ọrụ ederede dee ọdịnaya onye ọrụ ga-enwe, n'ọnọdụ nke m, m na-eji akpaokwu ahụ: <° Site na onye ọrụ Linux .mgbe ha dere ederede na otu oyi akwa ha na-enye nri pịa> mkpụrụ maka nhọrọ. Site na ederede ahọpụtara anyị were ngwakọta ngwakọta (grajentị), n'ọnọdụ m ka m ji acha anụnụ anụnụ, ma ha nwere ike iji nke ha masịrị ha. Ha mejupụtara nhọrọ na grajentị, na-ahapụ ya dị ka nke a:
Ọzọ anyị ga-oyiri ederede 14 ugboro iji nweta 15 yiri oyi akwa:
Ihe nrịbama A na-egosi ebe ị kwesiri ịpị iji mepụta oyi akwa ahọpụtara
Site ugbu a gaa n'ihu, anyị ga-arụ ọrụ na ọkwa ndị ahụ, na-agbakwunye nzacha na nghọta
* Nzọụkwụ mbụ bụ ịrụ ọrụ site na oyi akwa 1 ruo 4 gụnyere Nzacha> blur> Gaussian blur na ụkpụrụ iji mee ihe bụ ihe ndị a maka ọkwa ọ bụla:
Na akwa 1 nhazi ntọala:
Kwụ: 12 px
Vetikal: 12 px
Na akwa 2 nhazi ntọala:
Kwụ: 9 px
Vetikal: 9 px
Na nhazi 3 nhazi ntọala:
Kwụ: 6 px
Vetikal: 6 px
Maka akwa 4 nyocha ntọala:
Kwụ: 3 px
Vetikal: 3 px
* Dị ka nzọụkwụ nke abụọ anyị ga-arụ ọrụ site na oyi akwa 11 ruo 15 (gụnyere), ya bụ, ya na akwa ise ikpeazụ. Nke mbụ, anyị ga-edozi usoro 5 ikpeazụ a na akụkụ nke ihe oyiyi ahụ, nke a dị mkpa iji nweta mmetụta achọrọ, ọnọdụ a: taabụ N'ígwé> Hazie Image Image. Mgbe ahụ, anyị na-edegharị akwụkwọ ndị ahụ na nọmba n'otu n'otu site na ịpị okpukpu abụọ na ntanetị, ha gbanwere aha ya na nọmba.
Ihe nzacha nke anyị ga-eji na akwa bụ Nzacha> blur> emegharị blur na anyị ga-etinye ya dị ka ndị a maka onye ọ bụla oyi akwa na a oyiri na anyị ga-ike nke ọ bụla n'ime ha:
Oyiri oyi akwa 11.
Nhazi nhazi, maka oyiri na nkpuchi mbu:
Akwa oyi akwa
Ikpokọta a oyi akwa 11 na oyiri (nri pịa oyiri nke oyi akwa 11 na họrọ ikpokọta ala)
Oyiri oyi akwa 12.
Ilele n'akuku: 180
A na-ejikọta oyi akwa 12 na otu.
Oyiri oyi akwa 13.
A na-ejikọta oyi akwa 13 na otu.
Oyiri oyiri 14
A na-ejikọta oyi akwa 14 na otu.
Oyiri oyiri 15
A na-agbanye oyi akwa 15 nke akwụkwọ ahụ.
Ihe anyị ga - eme ugbu a bụ gbanwee opacity nke ọkwa ndị a:
1 ka 60%
2 ka 70%
3 ka 80%
4 ka 90%
11 ka 90%
12 ka 80%
13 ka 70%
14 ka 60%
15 ka 50%
Anyị ga-ahọrọ usoro ndabere anyị iji mepụta ya ugboro anọ, na-ahapụ ọkwa abụọ yiri nke ahụ. Anyị na-eweli ikpeazụ oyiri ndabere n'elu anyị oyi akwa 1 (na akụ na-atụ aka na oyi akwa navigator n'akụkụ akara ahụ A).
Anyị na-emegharị ọzọ ma bulie ya n'elu oyi akwa 2 na na, na-ahapụ nzụkọ etinyere n'etiti ederede n'ígwé dị ka nke a:
Ugbu a, ka anyị faịlụ> chekwaa dika ma kpọọ faịlụ ahụ na ndọtị .gif na njedebe ka ihe atụ:userbar.gif .
Na windo nke gosipụtara na ọ dị mkpa ka ị kaa akara nhọrọ ahụ:
Chekwa dika mmebe
Mgbe ahụ, anyị pịa mbupụ wee nata.
Anyị na-agagharị na faịlụ anyị ma ọ ga - adị ka nke a:
Enwere m olileanya na ị ga-ahụ na ọ bara uru ma ọ ghọtara nke ọma, ajụjụ ọ bụla egbula oge ịkpọtụrụ m, ana m ahapụ ihe atụ ọzọ nke nsonaazụ enwere ike nweta:
Ọ bụrụ n’ịchọta ọkọlọtọ nke abụọ m deziri oge ibi na okpokolo agba ... M ga-agbakwunye ya ma emechaa, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya.
Ọtụtụ ekele tavo Maka nkuzi a magburu onwe ya, nsonaazụ ya dị mma haha… na, mee ka ị mara na ọ bụrụ na ịchọrọ itinye nkuzi Gimp ebe a, edemede ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịtụ anya, ọ ga-abụ ihe nsọpụrụ nye anyị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Imebe » Otu esi eji Gimp mepụta ogwe aka ihe ngosi gi
Ekwesịrị m ime nke ahụ banyere Gimp !!!
Ka anyị lee ma n’izu a enwere m ike 😉
Kedu ihe "poolu" pụtara na kedụ mba (ndị) ị na-eji?
Oh, kedu ka ha si akpọ ya?
pole = soyez le Premier = onye mbụ na-ekwu okwu
Osisi sitere na pole.
OO na-akpali OO ị mụtara ihe ọhụrụ ebe a 🙂
akpali! Amaghị m ozi ahụ
Na mkpọpụta ya? »Osisi», «poul», «pol»?
Daalụ nke ukwuu @ KZKG ^ Gaara maka izipu ya, nsọpụrụ bụ nke m maka ịnwe ohere ịgbasa okwu banyere Gimp, nnukwu ngwa ọrụ a na-elelịkarị.
Aga m agbali itinye aka na nkuzi dị egwu na ngwụsị izu, ọ bụ obere ihe m nwere ike ịme iji kelee maka nnukwu mmemme a.M sitere na Photoshop ma na mbụ ọ siri ike imeghari mgbanwe ahụ mana ọ bara mgbalị ahụ.
M na-emekwa ụfọdụ ihe na Blender mana m ka bụ obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ… .Ọkọghị omume hehe
M na-ekwughachi ekele m maka ọrụ ị na-arụ na ibe a.
Daalụ Tavo, nkuzi magburu onwe ya. Agbanyeghị na amaghị m ihe ọ bụla gbasara eserese eserese, GIMP bụ ngwa ọrụ bara uru nke nyeere m aka n'ọtụtụ ọnọdụ. Ekele dịrị ya, amụtara m ịmepụta akara ngosi dị mfe mana mara mma; nwere ọtụtụ ndebiri na nsonaazụ maka logos. Ọ ga-amasị m ịmụtakwu banyere ngwa ọrụ a. Olileanya ị nwere ike ịga n'ihu ịkekọrịta ihe ọmụma na blog a. Banyere.
Ekele dịrị gị maka ịza ajụjụ Carlos w .na ị na-eme omume ị ga-amata usoro ihe omume a, echere m na isi ihe a bụ Gimp bụ na agbasaghị ọtụtụ ihe gbasara mmemme ahụ yana nkuzi ole na ole. aga-eme, nke dị na Photoshop dịkwa ike mana ndọtị ndị bara uru bara uru
Oops, Amaghịdị m na enwere mgbakwunye maka Photoshop, ma echeghị m na ụdị mgbatị ahụ ga-adị oke ọnụ. Enwere m olileanya na anyị nwere ike ịnụ ụtọ nkuzi gị ọzọ, ana m ekele gị nke ukwuu.
wow aga m eme ya ugbua OO ekele
Ọ na-enwe ekele, ọ na-adabara m nke ọma iji gimp na-eme ihe.
Daalụ maka ntuziaka tavo obere bụ ịmụ otu esi eji ihe eme ihe GIMP
Akwa 😀 Mgbe m nwere oge, m na-anwale ya.
Ọ dị mma mgbe m nwere mmasị na ụdị ihe osise m na-anwale ya XD
Ezigbo tuto, mana enwere ma:
Ndị ọrụ ahụ (opekata mpe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu) bụ 350 are 19, yabụ nke a karịrị nha. Kpachara anya, anaghị m emegide akụkụ maka ogwe aka nke nkuzi a, naanị m chọrọ ịkọwa okwu a (na m na-emekwa ndị ọrụ ọrụ).
Ekwesiri ịkọwapụta ya, ọ bụ eziokwu na ogwe ọrụ ka pere mpe, enwere ike ịme ihe ngosi ahụ na ogo ọ bụla, nke anaghị emetụta nsonaazụ ikpeazụ.
Mgba mbinye aka agbụ maka ọgbakọ, kedụ ezigbo ncheta ...
Ezi ntuziaka, enwere m mmasị na nsonaazụ nke enwetara. Aga m agwa Ren mee m otu n'ime Trisquel xD
Ọfọn, enwere ike, m ga-eme ya n'onwe m na anaghị m efunahụ ihe ọ bụla site n'ịgbalị 😉
Onye ukwu +
Etu ị ga - esi mara ma awụnyere ngwugwu ma ọ bụ na ọ bụghị n’ụzọ dị mfe na ngwa ngwa